Shaqada ugu weyn ee wakiilka dejinta
Shaqada ugu weyn ee dahaarka waa qurxinta iyo ilaalinta. Haddii ay jiraan cillado qulqulka iyo isbarbar -dhigga, kaliya ma saameyn doonto muuqaalka, laakiin sidoo kale waxay dhaawaceysaa shaqada ilaalinta. Tusaale ahaan, samaynta godadka yaraanshaha ayaa sababa dhumucda filimka rinjiga oo aan ku filnayn, iyo samaynta pinh ...
Maxay yihiin wax -qabadka iyo sifooyinka waqtiga ee wakiilada qoyaanka
DMA waxay ku habboon tahay dhammaystirka jilicsan ee dharka suufka ee heerka sare ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa dhammaystirka hawo-biyoodka iyo jilicsanaanta polyester-suufka, maro polyester saafi ah, dharka fiber-ka-samaysan ee dadku sameeyay, marooyin kala duwan oo la tolay iyo dhar-tollan. Waxay ka dhigi kartaa dharka inuu yeesho cimri dheer oo iska caabin ah ...
Sida Loo Hagaajiyo Midabka Degdegga ah ee Wakiilada Hagaajinta iyadoo Rinjiyeyn Toos ah
1. Midabada caadiga ah ee aan tooska ahayn (N), sida NB cagaaran oo madow, NM bunni madow, iwm. Midabada caadiga ah ee aan tooska ahayn waxay markii hore benzidine u isticmaali jireen jidhka laba-madaxa ah, oo hadda la mamnuucay, oo hadda u adeegsanaya aniline oo ah labada madax halkii. 2. Dheeh aan toos ahayn (D), kaliya ma midabayn karo T/C, T/R iyo blende kale ...